I-Web Scraping ichazwe ngu-Expert Semalt
I-Web scraping yinkqubo yokuphuhlisa iinkqubo, iirobhothi okanye i-bots ezinokukhipha okuqukethwe, idatha kunye nemifanekiso kwiwebhusayithi. Nangona i-screen scraping inokukopisha kuphela iipekseli eziboniswe kwisikrini, ukukhwabaniswa kwewebhu ukukhahlela yonke ikhowudi ye-HTML kunye nayo yonke idatha egciniweyo kwi-database. Iyakwazi ukuvelisa i-website yendawo kwenye indawo.
Yingakho i-web scraping isetyenziselwa kumashishini agqirha efuna ukuvunwa kwedatha. Ezinye zeendlela ezisemthethweni ze-web scrapers zilandelayo:
1. Abaphandi basebenzise ukuba bakhiphe idatha kwiimidiya zentlalo kunye namaforamu.
2. Iinkampani zisebenzisa i-bots ukukhupha amanani kwiiwebhusayithi ezikhuphisanayo xa kuthelekiswa nexabiso.
3. Iinjongo ze-injini ze-bhendi zokukhangela rhoqo rhoqo ngenjongo yokubeka indawo.
Izixhobo zokucoca iWebhu zixhobo zesofthiwe, izicelo, kunye neenkqubo ezicoca kwiinkcukacha zolwazi kwaye zikhuphe idatha ethile. Nangona kunjalo, amaninzi amanqamla ayenzelwe ukwenza oku kulandelayo:
Ukukhupha idatha esuka kuma-API
Gcina idatha echithwe
Ukuguqula idatha echithwe
Ukuchonga Izakhiwo zewebhu ze-HTML
Njengoko iibhugi ezisemthethweni kunye ezinobungozi zisebenza ngenjongo efanayo, zihlala zifana. Nazi iindlela ezimbalwa zokuhlula omnye kwenye.
Abaqingqiweyo abafanelekileyo bayabonwa ngumbutho onabo. Ngokomzekelo, i-Google bots zibonisa ukuba zingabakwaGoogle kwisihloko sayo seHTTP. Ngakolunye uhlangothi, i-bots enobubi ayinakunxibelelaniswa nayiphi na inhlangano.
I-bots esemthethweni iyavumelana ne-robot yesayithi..ifayile ye-txt kwaye ungahambi ngaphaya kwamaphepha avunyelwe ukutshiza. Kodwa i-bots enobubi iyaphula umyalelo womqhubi kunye ne-scrape kuwo wonke iphepha lewebhu.
Abaqhubi kufuneka batyalise ezininzi izixhobo kumaseva ukuze bakwazi ukukhawuleza ixabiso leenkcukacha kwaye bazinze. Yingakho abanye bavame ukusebenzisa ukusetyenziswa kwebhokisi. Zihlala zichaphazela iinkqubo zendawo ezazisasazekayo kunye ne-malware efanayo kwaye zilawula ukusuka kwindawo ephakathi. Yiyo ndlela abayakwazi ngayo ukuyifumana inani elikhulu lwedatha ngexabiso eliphantsi.
Umenzi wobubi balolu hlobo unobungozi obubi usebenzisa iipotnet apho iiproperprogram ezisetyenziselwa ukuhlawula amaxabiso omncintiswano. Injongo yabo ephambili kukunciphisa abakhuphiswano babo kuba iindleko eziphantsi zizinto ezibalulekileyo eziqwalaselwa ngabathengi. Ngelishwa, amaxhoba enkcitho yokuhlamba iya kuqhubeka nokuhlangabezana nokulahlekelwa kweentengiso, ukulahlekelwa kwabathengi, kunye nokulahleka kwengeniso ngelixa abenzi bobubi beza kuqhubeka bekunandipha.
Ukukhutshwa kokuqukethwe kukukhwabanisa ngokungekho mthethweni komxholo wesinye isayithi. Amaxhoba alo hlobo lobusela ngokuqhelekileyo iinkampani ezithembele kwiikhathalogu zemveliso ye-intanethi kwishishini labo. Iiwebhusayithi eziqhuba ibhiziniselwano zabo kunye nomxholo wedijithali nazo zixhomekeka kwi-scraping content. Ngelishwa, olu hlaselo lunokuba lubuhlungu kubo.
Ukukhuselwa kwe-Web Scraping
Kunokuphazamisa ukuba iteknoloji eyamkelwa ngababi ababenzigwenxa inikwe amaninzi amanyathelo okukhusela angasebenzi. Ukunciphisa le nto, kufuneka usebenzise iMperva Incapsula ukukhusela iwebhusayithi yakho. Iqinisekisa ukuba zonke iindwendwe kwiziko lakho zivumelekile.
Nantsi indlela i-Imperva Incapsula isebenza ngayo
Iyaqala inkqubo yokuqinisekisa kunye nokuhlolwa kwegranular kwee-header ze-HTML. Le fayile inquma ukuba umvakalisi ungumntu okanye i-bot kwaye iyakwazi ukuba ngaba isivakashi sikhuselekile okanye sibi.
idumela le-IP linokusetyenziswa. Idatha ye-IP iqokelelwa kumaxhoba ahlaselwa. Ukutyelela kuyo nayiphi na i-IPs iya kuhlolwa kwakhona.
Iprogram yokuziphatha yindlela enye yokufumanisa i-bots enobubi. Zizo ezo zibandakanya kwisantya esinqabileyo sesicelo kunye neepatheni zokukhangela. Bahlala besenza imizamo yokuthintela nganye iphepha lewebhusayithi ngexesha elifutshane kakhulu. Loo mzekelo uyakrokraza kakhulu.